Uncategorized – Page 65 – Shabakadda Amiirnuur
Uncategorized Wararka Gudaha
Video+Sawirro: Alkataa’ib oo Filim Cajiib ah kusoo bandhigtay Weeraradii Hoteellada Dayax iyo Peace ee Muqdisho.
Mu’asasada Alkataa’ib garabka warbaahineed ee Xarakada Al-Shabaab ayaa baahisay filim xiiso badan oo lagusoo bandhigayo weeraradii ay ciidankoodu ku qaadeen Hotelada Muqdisho. Filimkan ayaa ah qeybtii 3aad ee silsilada la yiraahdo (فقاتلوا أئمة الكفر) xalqadiisa 2-aad waxaana lagusoo bandhigayaa duullaanadii iyo howlgalladii gaarka ahaa ee lagu beegsaday Hotellada waaweyn ee […]
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa saaka aroortii hore weerar cag marin ah ku qaaday saldhig ciidan oo kuyaal deegaan kaabiga ku haya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe. Weerarka oo dhacay saaka aroortii hore ayaa lagu beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay […]
Diiradda Jimcaha: Ergadii Soo Dooratay Wasiir Goodax Iyo Kuwa Kale oo Isku Dhiibay Al-Shabaab.
Dhageyso Barnaamijka Tarbiyada Caruurta 15-12-1440.
Tarbiyada Caruurta waa barnaamij muhim ah oo Jimco walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaana lagu soo qaataa qodobo badan oo muhim u ah barbaarinta ubadka iyadoo fursado badanna laga siiyo caruurta. Waxaa barnaamijka soo jeedinaya Abuu Bakar Ibraahim Geedi. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Tarbiyada Caruurta 16-08-2019
Weeraro Khasaare Lagu Gaarsiiyay Ciidamada Jubbaland oo Ka Dhacay Duleedka Kismaayo.
Faahfaahin ayaa kasoo baxaysa weerar saacado ka hor ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo kaasoo lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland. Weerarada ayaa yimid kadib markii ciidamada Jubbaland ay dhaqdhaqaaq ka sameeyeen duleedka degaanka Baarsanguuni maadaama uu magaalada Kismaayo gaaray ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Jems Swan. Ciidamadan ayaa waxaa […]
Waa Sidee Xaaladda Ciidamaii “DF” Ee Ku Dhaawacmay Weeraradii Awdheegle.
Ra’iisulwasaaraha DF ayaa shalay oo khamiis ahayd booqday askartii ku dhaawacantay weeraradii waaweynaa ee Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose. Mid kamid ah isbitaalada shisheeyaha ee Xamar ayaa la dhigay dhaawacyada askarta kuwaasoo loo diiday saxaafadda iney soo sawirtaan marka laga reebo warbaahinta DF oo […]
Saraakiil Ka Tirsan Sirdoonka Itoobiya oo Xalay Ku Hoyday Kismaayo.
Lix Sarkaal oo ka tirsan sirdoonka Itoobiya ayaa xalay ku hoyday madaxtootada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Inkastoo aan la shaacin ujeedada socdaalka saraakiishan ayaa haddana warar hoose oo la helayo waxay sheegayaan in hadafkoodu yahay qaabeynta doorashada la filayo iney magaalada ka dhacdo. Itoobiya waxay aad u […]
Faahfaahin: In Ka Badan 50 Askari oo DF Looga Dilay Weeraro Naf Hurnimo Ah oo Ka Dhacay Awdheegle.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa laba weerar oo naf hurnimo ah oo barqanimadii maanta ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Sh/hoose. Labada weerarba waxaa lagu beegsaday xero ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa DF oo ay dhawaan shisheeyuhu geeyeen. Jugta qaraxyada waxaa si aad ah looga maqlay degaano […]
Nayjeeriya oo Iska Joojineysa Raashinka Dibadda Looga Keeno.
Tartan xooggan oo dhanka dhaqaalaha ah ayaa ka jira caalamka iyadoo dal walba uu ku dadaalayo sidii uu u yareyn lahaa amaba uu isaga joojin lahaa cunnooyinka dibadda uga yimaada si loo dhiira galiyo wax soo saarka gudaha. Dowladda Nayjeeriya ayaa haatan wada qorshe ay ku joojineyso cunnada dibadda, ujeedaduna […]